စင်္ကာပူမှာလူ့ကြီးထွားဟော်မုန်းကိုဝယ်ခြင်းငှါအဘယ်မှာရှိ - HGH စင်္ကာပူ?
HGH ထိုင်းနိုင်ငံက မေလ 30, 2018
1. ဘယ်မှာငါစင်္ကာပူမှာ HGH သို့မဟုတ်လူ့ကြီးထွားဟော်မုန်းကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းဝယ်နိုင်
2. စင်္ကာပူမှာ HGH ၏အကောင်းဆုံးအမှတ်တံဆိပ်
2.2 အသုံးပြုမှု HGH Genotropin ကလောင်၏လွယ်ကူခြင်း
2.4 လေယာဉ်နှင့်လေယာဉ်ကွင်းပေါ်တွင် HGH နှင့်အတူခရီးသွား
3. HGH (Somatropin) ကဘာလဲ?
3.1 အားကစားအတွက် HGH အသုံးပြုခြင်း
3.3 ကာယဗလလေ့ကျင့်ခြင်းအတွက် HGH
5. HGH ၏သောက်သုံးသော
6. စင်္ကာပူနှင့်ငွေပေးချေမှုနည်းစနစ်များအတွက် HGH စျေးနှုန်း
စင်္ကာပူမှာ HGH ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း
HGH ထိုင်းဆေးဆိုင်တရားဝင်အားလုံးစင်္ကာပူကနေကျနော်တို့ရဲ့လူနာတွေအပါအဝင်တစ်ကမ္ဘာလုံး somatropin ၏လိုအပ်ချက်အတွက် client များထောက်ပံ့သည့်ထူးခြားသောလူ့ကြီးထွားဟော်မုန်းဆေးဝါးတစ်ခုဖြစ်သည်။ အားလုံးကြီးထွားဟော်မုန်းကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများ, ထိုင်းနှင့်စင်္ကာပူမှာနှစ်ဦးစလုံးလုံးဝဥပဒေရေးရာများမှာအရည်အသွေးမြင့်လက်မှတ်များနှင့်လိုင်စင်ရှိသည်။
စင်္ကာပူကနေလူနာကျွန်တော်တို့ရဲ့ရုံးမှာကြင်နာစွာယူသင်မည်သို့ပြပါလိမ့်မယ်တော်မူသောသင်တို့လိပ်စာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အထူးကု၏အမြန်ချောပို့နှင့်ထွက်ခွာခြင်းဖြင့်နှစ်ဦးစလုံးဘန်ကောက်တွင်မူးယစ်ဆေးတိုင်ပင်, လက်ခံနိုင်ပါတယ် HGH ထိုးလည်းသင်မှန်သငျ့အိမျတံခါးမှတက်, ရှိသမျှညှိနှိုင်း, အမိန့်များနှင့်ငွေပေးချေတာသောက်သုံးသောအဘို့အကြံပြုချက်များနေအိမ်စွန့်ခွာခြင်းမရှိဘဲအွန်လိုင်းကိုဖန်ဆင်းနိုင်ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံတို့မှစင်္ကာပူမှကြီးထွားဟော်မုန်း၏အွန်လိုင်းမှပေးပို့အမိန့်ပေးနိုင်သည်။
စင်္ကာပူမှာ HGH ရဲ့အကောင်းဆုံးအမှတ်တံဆိပ်ကဘာလဲ?
စင်္ကာပူကနေလူနာအပါအဝင်လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ထံမှကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်၏အဆိုအရအကောင်းဆုံးလူ့ကြီးထွားဟော်မုန်းကုမ္ပဏီ Pfizer ရဲ့ထုတ်ကုန်ဖြစ်ပါသည် - Genotropin GoQuick ကလောင် 12mg (36IU) ကျနော်တို့ထိုင်းနိုင်ငံသို့တင်သွင်းရန်နှင့်ဒါကြောင့်ကျနော်တို့နားလည်လိမ့်မည်ဟုဘယ်လ်ဂျီယံ-ထုတ်လုပ်ဥရောပအရည်အသွေး Genotropin ပိုကောင်းသည်အဘယ်ကြောင့်?
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာမူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ပစ္စည်းကိရိယာများ၏ဦးဆောင်ဥရောပထုတ်လုပ်သူကနေ - Pfizer ကြီးထွားဟော်မုန်းထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ၏အရည်အသွေးမြင့်မားအတွက်ယုံကြည်စိတ်ချဖြစ်ပါသည်
အသုံးပြုမှု HGH Genotropin ခြံ၏လွယ်ကူခြင်း
ကြီးထွားဟော်မုန်း genotropin သိုလှောင်မှုနဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏အသုံးပြုမှုအဆင်ပြေစေရန်အထူးအာရုံစိုက်ထိုက်တန်ပါတယ်။ ကြီးထွားဟော်မုန်း၏ဆေးထိုးဘို့အဘိတ်ရုံ2မိနစ်ကြာ, genotropin ၏ထုတ်လုပ်သူမူးယစ်ဆေးများအတိအကျသောက်သုံးသောညှိ, ဆေးထိုးဖြေရှင်းချက်တွေနဲ့ကြီးထွားဟော်မုန်းအမှုန့်ရောစပ်၏ရိုးရှင်းများနှင့်အဆင်ပြေ၏စောင့်ရှောက်မှုခံယူလေ၏။
လက်ကိုင်၏ကိရိယာပြီးသားရောစပ်နှင့်ကြီးထွားဟော်မုန်းအဘို့အဖြေတစ်ခုပါရှိသည်အတွင်းရှိအသေးဆုံးအသေးစိတ်ထွက်ထင်နေသည် - သင်သာ 0.6 သို့မဟုတ် 0.9 ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ ml ဥပမာများအတွက်သောက်သုံးသောသတ်မှတ်ထားဖို့အနေအထား abc ကနေဖုလှည့်ခြင်းဖြင့်ရောနှောနိုင်သည် - ကို click နှင့်သင်လုပ်ပြီးသွားပြီ!
ကြီးထွားဟော်မုန်း၏ကလောင်အကာအကွယ်ဦးထုပ်နှင့်အတူဖန်ဆင်းထားသည်, က 8-12 ဒီဂရီအပူချိန်မှာသိမ်းဆည်းထားရပါမည်ကြီးထွားဟော်မုန်းရောစပ်ပြီးနောက်, သင်ရုံ, အပ်ဖယ်ရှားမယ်အကာအကွယ်ဦးထုပ်ပေါ်တွင်တင်ပဲရေခဲသေတ္တာထဲမှာထည့်သွင်း
လေယာဉ်နှင့်လေယာဉ်ကွင်းပေါ်တွင် HGH နှင့်အတူခရီးသွား
စင်္ကာပူကနေအခြို့သောဖောက်သည်တစ်ဦးလေယာဉ်ပေါ်မှာယူအမည်ရ, စင်္ကာပူသို့မဟုတ်ခရီးသွားမှထိုင်းနိုင်ငံတို့မှကြီးထွားဟော်မုန်းယူကြိုက်တတ်တဲ့။ ဆေးထိုးပိုက်, ampoules တစ်ကြိမ်ထပ်အကောက်ခွန်မှာသံသယသို့မဟုတ်နောက်ထပ်စာရွက်စာတမ်းများပေးရန်လိုအပ်ကြောင်းဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်ကိုအိုး - စျေးပေါနှင့်အန္တရာယ်ရှိတရုတ်အတုမတူဘဲ, သငျသညျသငျနှငျ့အတူတစျခုလုံးပထမဦးဆုံးအကူအညီကိရိယာအစုံသယ်ဆောင်ရန်မလိုအပ်ပါ။
သငျသညျရိုးရိုးအိတ်သို့မဟုတ်လက်အိတ်၌ထားတဲ့ဘောပင်တစ်ချောင်း Genotropin ကအကြောင်းကိုမေ့လျော့ပေါင်း
HGH (Somatropin) ကဘာလဲ?
ကြီးထွားဟော်မုန်းသို့မဟုတ် somatotropin အဆိုပါ pituitary ၏ anterior အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအနေဖြင့်အဓိကလူ့ဟော်မုန်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ Somatotropin, ဟိုအရေးယူအားပေးအားမြှောက်အသစ်ကဆဲလ်၏ပရိုတိန်းထုတ်လုပ်မှု၏ပေါင်းစပ် accelerates, အရေပြားအောက်ဆုံးအဆီလျှော့ချအပေါ်သက်ရောက်မှု, အဆီမှကြွက်သားထုထည်၏အချိုးအစားတိုးပွားစေပါသည်။ ဒဏ်ရာနှင့်အရိုးရောဂါများအရေပြား, ကုထုံး၏မီးလောင်ဒဏ်ရာများပြီးနောက်အနာကျက်သက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။
အမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများနှစ်ခုလုံးအတွက်အရေးပါသည်အဘယ်အရာကိုတစ်ဦးအစွမ်းထက် Anti-အိုမင်းအေးဂျင့်အဖြစ်ဆောင်ရွက်အသစ်သူတွေနဲ့အတူအဟောင်းသို့မဟုတ်ဆဲလ်အသေများပြန်လည်မှတ်ပုံတင်ရေးနှင့်အစားထိုးနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်။ တကယ်တော့, ကြီးထွားဟော်မုန်းကြီးထွားဟော်မုန်းများ၏တိုက်ရိုက်ရောင်းချခြင်းအပေါ်ပိတ်ပင်ထားမှုများအတွက်အဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်သောအနာဂတ်တစ်ခုဆန်းသစ်မူးယစ်ဆေးဖြစ်ပါသည်။
အတော်များများခေတ်မီဓာတ်ခွဲခန်းနှင့်အဝလွန်လူတွေကိုကြီးထွားဟော်မုန်းများ၏အခြေခံပေါ်မှာမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပေါ်သုတေသနပြုအလုပ်, ကာယဗလများအတွက်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်တစ်ခုဆန့်ကျင်အိုမင်းမူးယစ်ဆေးအဖြစ် "လူငယ်၏စမ်းရေတွင်း" အဖြစ်။
အားကစားအတွက် HGH အသုံးပြုခြင်း
စင်္ကာပူကနေအတော်များများအားကစားသမားအားကစားသမားများကိုမကြာခဏဒဏ်ရာ, ကြွက်သားညောင်းနှင့်ရွတ်ရဘတ်စကက်ဘော, ဘောလုံးနှင့်အခြားအားကစားထားတဲ့အတွက်စည်းမျဉ်းများမပါဘဲတိုက်, ထိုကဲ့သို့သောလက်ဝှေ့အဖြစ်အန္တရာယ်ရှိတဲ့အားကစားမှဒဏ်ရာနှင့်ဒဏ်ရာ-related ဒဏ်ရာကနေပြန်လည်နာလန်ထူဖို့ကြီးထွားဟော်မုန်းကိုအသုံးပြုပါ။ HGH သင်လျင်မြန်စွာပြန်လည်နာလန်ထူကူညီပေးနိုင်ပါသည်။
အဆစ်များတွင်အားကစားအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွေ့အကြုံကိုနာကျင်မှုရဲ့အဆုံးမှာပရော်ဖက်ရှင်နယ်အားကစားသမား, ဒူးနှင့်နောက်ကျော။ ဥပမာအားဖြင့်, ဒူးတွေ့ကြုံသို့မဟုတ်ပြန်ကြသူလူနာများကို - တိုးတက်မှုနှုန်းဟော်မုန်းတွေနဲ့အဆစ်များ၏ကုသမှုအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ရလဒ်များကိုပြသ
နာကျင်မှု2တစ်လလုံးဝ pass နှင့်လူနာမဆိုပြဿနာများမရှိဘဲအသက်နှင့်တက်ကြွသောအရာကြွင်းသမျှ and Play ဂိမ်းများကိုခံစားရန်ဆက်လက်နိုင်ပါတယ်ပြီးနောက်ကြီးထွားဟော်မုန်းထိုးဆေး၏စားသုံးမှုစတင် 1 ပတ်သိသာထင်ရှားသောတိုးတက်မှုများကိုသတိပြုမိရန်စတင်ပြီးနောက်နာကျင်မှု
ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ကြီးထွားဟော်မုန်း၏လူကြိုက်အများဆုံး application ကိုပိုလျှံအလေးချိန်, အရေပြားအောက်ဆုံးဆီဥနှင့်တိုးမြှင့ကြွက်သားဖွံ့ဖြိုးမှု၏ဆုံးရှုံးမှုများအတွက်အားကစားရုံထဲမှာပရော်ဖက်ရှင်နယ်အားကစားသမားများနှင့်အရင်ကဆိုရင်ကြားတွင်အဖြစ်ကာယဗလအတွက်ဖြစ်ခဲ့သည်။
ကြီးထွားဟော်မုန်းအားကြီးသောဟိုအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်က pituitary gland မှအလားတူကြီးထွားဟော်မုန်းပုံသေနည်းရှိတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သည်အခြား steroids မတူဘဲအသုံးပြုဿုံဘေးကင်းလုံခြုံသည်။
အဆိုပါလူနာ 25 နှစ်ကြာငြင်းပယ်ခြင်းနှင့်လူတစ်ဦး၏နက်ရှိုင်းသောအသက်ကြီးသည်အထိအဆက်မပြတ်ကျဆင်းဆက်လက်ထားတဲ့ကြီးထွားဟော်မုန်း၏သဘာဝထုတ်လုပ်မှု, များအတွက်အစားထိုးချေ။ အဟောင်းကို 25 နှစ်အောက်မြီးကောင်ပေါက်အလွယ်တကူကာယဗလအတွက်ရလဒ်ကောင်းအောင်မြင်ရန်နိုင်ပါတယ်ဘာကြောင့်ဖြစ်နိုင်ကြောင်းပါပဲ။
ပရိုတိန်းနှင့်အမိုင်နိုအက်ဆစ်များမြင့်မားသည့်အကြောင်းအရာများနှင့်သင့်လျော်သောအစာအာဟာရနှင့်အတူအားကစားရုံနှင့်အာဏာဝန်အတွက်တက်ကြွစွာလေ့ကျင့်ခန်းအတွက်တိုးတက်မှုနှုန်းဟော်မုန်း - အကြိမ်ပေါင်းများစွာအသစ်ကဆဲလ်၏ဖွဲ့စည်းခြင်းကိုတက်အမြန်နှုန်း, ကြွက်သားမျှင်အသစ်သူတွေနဲ့အတူဟောင်းဆဲလ်အစားထိုး - ကကြီးထွားဟော်မုန်းဖြစ်ပါတယ် သင့်ရဲ့အိပ်မက်ကိုယျခန်ဓာ၏ဆောက်လုပ်ရေးအတွက်အရေးအပါဆုံးအုတ်ဖြစ်ပါသည်
အရေးအပါဆုံးဖြစ်ရပ်မှန်များ 25 နှစ်ကြာပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးမှအဝလွန်ခြင်း၏ဆက်ဆံရေးသည် - ကကြီးထွားဟော်မုန်းကိုတိုက်ရိုက်၏ 25 နှစ်ပေါင်းပြီးနောက်, ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဇီဝြဖစ်ထိခိုက်စေသောအလွန်ရိုးရှင်းတဲ့ရဲ့ - ခန္ဓာကိုယ်တက်ကြွစွာတင်ပါး, ဝမ်းဗိုက်နှင့်ခြေထောက်အဆီသိုက်စုဆောင်းရန်စတင် ခန္ဓာကိုယ်ကြီးထွားဟော်မုန်း၏ကြီးထွားအဘိုးကြီးကိုအောက်တွင် Self-stimulation ၏အဆင့်နှင့်ခန္ဓာကိုယ်ထက်အဆမှာလျော့ကျ
ကံမကောင်းစွာပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်က၎င်း၏ဇီဝနာရီအရင်းအမြစ်များကိုရှိပြီးဘယ်လောက်မွကွေီးပျေါမှာအသကျရှငျနထေိုငျမဟုတျဘဲအရာရာကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်တစ်ခုဖြစ်သည်နှင့်အအိုမင်း။ တစ်ဦးကလူတစ်ဦးအဟောင်းတွေကိုအစားထိုးရန်အတွက် wear နဲ့မျက်ရည်တစ်ရှူး၏, ကြွက်သားတွေအသစ်ဆဲလ်၏နှေးကွေးသောသစ်များအစားထိုးစိုက်ပျိုးကြောင့်အဟောင်းကိုကြီးထွားလာခြင်းနှင့်လူတစ်ဦးအသက်မှစတင်ထွက်ဝတ်ဆင်။
ကြီးထွားဟော်မုန်းအသစ်ကဆဲလ်တွေ, တစ်ရှူးများနှင့်ဒြပ်ပေါင်းများ၏ခြစ်ခြင်းနှင့်အဆောက်အဦးကိုလှုံ့ဆျော။ 1 တစ်လပြီးနောက်သင်ဆံပင်၏ဖွဲ့စည်းပုံမှာ, အရေပြား, လက်သည်းအတွက်တိုးတက်မှုသတိထားမိ။ ထွက်ပန်းခင်းလမ်း။
လူငယ်, အလှအပနှင့်ကျန်းမာရေး - ဟုတ်ကဲ့ကသက်ရှိလူသစ်တွေနဲ့အတူဟောင်းဆဲလ်အစားထိုးတစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာသန့်ရှင်းရေးကစတင်ခဲ့သည်နှင့်လူတစ်ဦးအရေးကြီးဆုံးအရာရရှိသွားတဲ့ကြောင့်ကြီးထွားဟော်မုန်းထိုးဆေးကိုကျေးဇူးတင်ဖြစ်ပါသည်
ကြီးထွားဟော်မုန်းဟာ pituitary gland ကနေထုတ်လုပ်သဘာဝကြီးထွားဟော်မုန်းမှတူညီ 191 အမိုင်နိုအက်ဆစ်များပါဝင်ပါသည်။ ကြီးထွားဟော်မုန်းမပါဘေးထွက်ဆိုးကျိုးရှိပြီးထို့ကြောင့်ကြီးထွားဟော်မုန်းချို့တဲ့နဲ့အရွယ်ရောက်ပြီးသူနှင့်ကလေးများနှစ်ဦးစလုံးမှစိတ်ချ
ကြီးထွားဟော်မုန်း၏အေးစက်ဧည့်ခံ3အမျိုးအစားသို့ခွဲခြားနိုင်ပါသည်:
- ကာယဗလများအတွက် HGH သင်တန်း
3 IU နဲ့တစ်ဦးအချည်းနှီးသောအစာအိမ်ပေါ်တွင်သို့မဟုတ်အိပ်ရာဝင်ချိန်မတိုင်မီမနက်တိုင်း
30 ကီလိုဂရမ်အထိအလေးချိန်နှင့်အတူဟောင်း 100 နှစ်အတွင်းလူများအတွက်
4-100 ကီလိုဂရမ်အထက်လူများအတွက်သို့မဟုတ် 120 IU သည်
စင်္ကာပူနှင့်ငွေပေးချေမှုနည်းစနစ်များအတွက် HGH စျေးနှုန်း
ထိုင်းနိုင်ငံအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ကြီးထွားဟော်မုန်းဆေးဆိုင်ထိုကဲ့သို့သောသြစတြေးလျ, အမေရိကန်သို့မဟုတ်ကနေဒါကဲ့သို့အခြားနိုင်ငံများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူနာအနိမ့်ပေးထားပါတယ်။ သင့်ရဲ့အမိန့်ကိုပေးဆောင်သင်သည်သင်၏အိမ်၏တံခါးဝကြီးထွားဟော်မုန်းရတဲ့၏အပြည့်အဝအာမခံချက်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်ငါတို့သည်လည်းတစ်ဦးကိုလစဉ်မှုနှုန်းကိုစာရင်းပေးသွင်းခြင်းဖြင့်တစ်ဦးပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ငွေပေးချေမှုစနစ်အားကမ်းလှမ်းရန်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီ
ထိုအချိန် မှစ. ကအလုပ်လုပ်တယ်? အားလုံးကတော့ဖောက်သည်တွေအများကြီးဝယ်ယူတစ်ခုချင်းစီကိုအချိန်အများကြီးပိုအမြတ်အစွန်းအနည်းငယ် packages များထက်ကြောင်းဆိုတဲ့အချက်ကိုရှိနေသော်လည်းတကြိမ်ကြီးထွားဟော်မုန်း 10-12 packages များ၏အပြည့်အဝသင်တန်းဆပ်ဖို့အဆင်သင့်ရှိပါတယ်။
ကျနော်တို့ကလိုအပ်သောကြီးထွားဟော်မုန်းလက်ခံရရှိရန်အဆင်ပြေပြေနဲ့လုံခြုံဖြစ်ပါသည်, ဤစာရင်းပေးသွင်းခြင်း option နဲ့အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့လူနာတွေကိုလစဉ်ကြီးထွားဟော်မုန်းပေးဆောင်နိုင်, ကြီးထွားဟော်မုန်းကုသ၏အပြည့်အဝသင်တန်းတစ်ခု fixed စျေးနှုန်းစေရန်စင်ကာပူကနေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်များအတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီ (6 လအတွင်း) လစဉ်လတိုင်း။
ဥပမာအားဖြင့်, တစ်ဦးကို client တစ်လကြီးထွားဟော်မုန်း၏2အထုပ်လိုအပ်ပါတယ် - သူ့ကို2တစ်လက္ကားစျေးနှုန်းမှာ pack မှာမိမိအလစဉ်ထောက်ပံ့ရေးများနှင့်သာလာမည့်လတွင်အမိန့်ရရှိသွားတဲ့နှင့်ကြီးထွားဟော်မုန်းရဲ့နောက်2အထုပ်ချေချေ။ ဤသည်အစီအစဉ်, ငါတို့အဘို့အဆင်ပြေကျွန်တော်တို့ရဲ့ client နှင့်ကျွန်တော်တို့နှင့်လူနာများအကြားလိုအပ်သောယုံကြည်မှုကိုဆက်ဆံရေးမျိုးဖန်တီးပေးပါတယ်။